Isitudiyo esifakwe ngokugcwele - City Center Belval - I-Airbnb
Isitudiyo esifakwe ngokugcwele - City Center Belval
Sanem, District de Luxembourg, i-Luxembourg
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Arca Properties Luxembourg
I-Cozy Studio (30m²) etholakala esakhiweni sokuhlala. Ifakwe ngokugcwele futhi ilungele ukuhlala isikhashana noma isikhathi eside, ibhizinisi noma ukuzilibazisa okuxhunyiwe.
Inxanxathela yezitolo i-Belval Plaza, i-cinema, i-Rockhal, isitimela esimaphakathi/ibhasi 🚌🚆station kanye neNyuvesi yaseLuxembourg kuyizinyathelo ezimbalwa nje zokuhamba.
Zitholele izindawo zokudlela eziphuzisa umlomo, amabha kanye nesifunda esingokomlando sefekthri yensimbi yasendulo i-Arcelor Mittal ngaphakathi kwebanga lokuhamba emnyango wakho.
Isitudiyo sinikeza umuzwa wendawo evulekile futhi ihlukaniswe izingxenye ezi-2 (igumbi lokulala / indawo yokuhlala + yokugezela).
Indawo inefenisha ngokuphelele. Amashidi amasha okulala, amathawula amasha, imikhiqizo yeshawa, ukufinyelela ku-Wi-fi, ifriji, amapuleti, ikhishi, umabonakude ngentambo ye-HDMI (AKUKHO umamukeli wesiteshi), njll.
ubusuku obungu-7 e- Sanem
4.62 · 58 okushiwo abanye
Izindawo zokudlela ezaziwayo, amabha, inxanxathela yezitolo kanye nezithuthi zomphakathi ezilula/ezisheshayo eziya edolobheni laseLuxembourg. Uphakathi kweBelval enhle.
Ibungazwe ngu-Arca Properties Luxembourg
Singu-24/7 etholakalayo kuwe
Hlola ezinye izinketho ezise- Sanem namaphethelo